Pipe Welding Machine, Beveling Machine, Orbital Welding Machine - Yixin
umatshini welding orbital oluzenzekelayo
oluzenzekelayo umatshini umbhobho welding
umatshini wokwenza i-beveling
Intsingiselo ye-MIG (FCAW / GMAW) yenkqubo yokuwelda, kufanelekile ukuhambisa imibhobho yeentlobo zentsimbi esizeni. Umbhobho osebenzayo u-5-50mm (ngaphezulu kwe-4114mm).
Kwisiseko se-YX-150, idibanise itroli yokuwelda kunye ne-feeder ye-welding, yonga kakhulu indawo, ikwaphucula ngokufanelekileyo uzinzo lwe-welding.
Ukuphuculwa kwemveliso ye-YX-150PRO, idibene nokutshintsha kwengalo kunye ne-teknoloji ye-swing technology, inako ukuhambisa i-5-100mm ubukhulu bombhobho (ngaphezulu kwe -125mm), isetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso yeoyile kunye negesi.
Njengomatshini wokuwelda we-TIG (GTAW), udibanisa ubuchwepheshe be-welding ubuchwephesha kwaye kufanelekile ukuhambisa iityhubhu ezibiyelweyo zeentlobo zentsimbi.
Isetyenziselwa ukuqhubekeka kobuso obuphukileyo kunye neflethi yombhobho wokuphela kombhobho wobuso ngeemfuno ezahlukeneyo zekona. Inokuqhubekekiswa kwi-U, V kunye nezinye iimilo zejiyometri.
Yamkela indlela ye-TIG (GTAW) yokuwelda ukuze ifakelwe imibhobho emincinci. Unokukhetha umatshini ofanelekileyo ngokobubanzi bayo bombhobho.
Umgangatho oMkhulu, ukuSebenza okuPhezulu, okuhlala ixesha elide kunye nokufanelekileyo
Xa kuthelekiswa ne-welding yesandla, izixhobo zethu zamkela indlela yokubhengeza ngemagnethi, enokuthi ishiye umkhondo, izandla zasimahla kunye nabasebenzi, kwaye inike iimveliso kunye neenkonzo ezingcono kwisiseko sokonga iindleko. Sijonge ukukunika isisombululo sethu sobuchule.
Ukwakhiwa kweMichiza kunye neoyile kunye negesi
I-6th CNCEC kwindawo
bonke isikhundla oluzenzekelayo umbhobho ukuwelda umatshini kunye nefuthe iwelding ogqibeleleyo
I-12 ye-CNCEC kwisiza
Ubonelelo lwaManzi kunye neMibhobho yamanzi
I-Carbon Steel Buttom Shaft
Iprojekthi yokuhambisa amanzi
Imeko yomoya Pipe Welding
Ukuchaneka ngokuthe ngqo
Welding Pipe Super-elingqingqwa
Tianjin YIXIN yasekwa ngo-2010 ikakhulu benza R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwemibhobho zonke-indawo izixhobo iwelding oluzenzekelayo, kwaye inika imibhobho ukuwelda iinkqubo isikhokelo zobugcisa ukunceda abathengi ukusombulula iingxaki zobugcisa. Siyabambelela kumxholo "wemveliso yenkxaso yezobuchwephesha eqinileyo, umgangatho ophezulu wokwandisa imarike, inkonzo yokunyaniseka yokunyusa uphawu lwethu" inyanzelisa ukugxila kubathengi kunye nokukhokelwa kwintengiso…
Amava aTyebileyo ingcali Inkonzo Isatifikethi
Ingcali, izinikele kwaye ithembekile
kunye nokuphuhlisa iminyaka engaphezu kwama-12, yixin professional ekuboneleleni isisombululo iwelding efanelekileyo. sihlala sizinikezele ekuhloliseni ukuba ngcono kwi-welding industry. ubungcali, uzinikele kwaye uthembeke, emva koko singangcono.
Ikakhulu benza R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwemibhobho zonke-indawo izixhobo welding oluzenzekelayo, kwaye ibonelela ngemibhobho ukuwelda iinkqubo isikhokelo zobugcisa ukunceda abathengi ukusombulula iingxaki zobugcisa.
Sibambelela kumxholo "wemveliso yenkxaso yezobuchwephesha eqinileyo, umgangatho ophakamileyo wokwandisa imarike, inkonzo yokunyaniseka yokunyusa uphawu lwethu" inyanzelisa ukugxila kubathengi kunye nokukhokela kwintengiso, ngokusebenzisa iimveliso ezinokuthenjwa nezisebenza kakuhle, kwinkonzo yasemva kokuthengisa ...
Isihloko sokuhlonipha ishishini lenzululwazi kunye netekhnoloji, i-ISO9001, i-ISO14001, isatifikethi se-OHSAS18001, isihloko sokuhlonipha ishishini lokuthenga ngetyala le-AAA, SineeLungelo lokushicilela ezi-5 nangaphezulu kwamalungelo awodwa ...
umda weenyawo zethu, iinkokheli, izinto ezintsha, iimveliso
Yintoni isiQinisekiso seNkqubo yeWelding
Fields Isicelo Welding oluzenzekelayo
Ikamva Welding oluzenzekelayo
Umnxeba: 0086-15138903401 / 0086-13034303972
Imeyile: lxy@yixinpipe.cn / mahy@yixinpipe.cn / ulwazi@yixinpipe.cn
Idilesi: Umda woPhuhliso weXiqing, Tianjin, China
© Copyright - 2020-2021: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo - AMP Iselfowuni